स्तन समाउँदा महिलालाई किन आनन्द आउछ ? यस्तो छ कारण « Light Nepal
स्तन समाउँदा महिलालाई किन आनन्द आउछ ? यस्तो छ कारण
Published On : 16 April, 2018 2:35 pm
By : Guru Neupane
९ बर्षकी किशोरीले बनाइन् रेप प्रुफ पेटी !
दिल्ली / भारतका उत्तर प्रदेशमा एक सामन्य परिवारकी एक यूवतीले यस्तो कोशिष गरेकी छिन कि,
सेक्सका लागि पुरस्कार र छुट्टी, गर्भवती बनाइदिए मालामाल !
सेक्सका लागि पुरस्कार र छुट्टी, गर्भवती बनाइदिए मालामाल ! यस्तै खबर छ रुसको । रुसको
मिथुन राशि – यस राशिका व्यक्ति एकदमै छिटो प्रेममा पर्ने गर्छन् । कसैको कुनै पनि
एजेन्सी । मानिसहरु कम पढे–लेखा भएको देशमा बलात्कारको घटना बढी हुने जनविश्वास छ । तर,
१५ वर्षअघि बिहे गरेको यो जोडीको